Wikipedia talk:Questions - ဝီကီပီးဒီးယား
မေး ။ ။ဖုန်းအတွက် unicode ကုိဘယ်လုိ down ကမလဲ မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားသုံးနေတဲ့ဖောင့် ဘယ်မှာရတာလဲ?
Where can I get font currently used in the Myanmar Wikipedia?
You can get Unicode 6.0 fonts from here: (Wikipedia:Font)
မေး ။ ။ စာတွေဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ် font သုံးရမလဲ။
I cannot read the content. Which font I should use?
ဖြေ ။ ။ မိတ်ဆွေမှာမြန်မာယူနီကုတ်စံကို အပြည့်အဝလိုက်နာတဲ့ စနစ်မရှိသေးလို့ပါ။ ဒါတွေကို SIL မှာဆွဲချယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆိုဒ်ကိုကြည့်ဖို့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ ဝက်ဗ်ဘရောက်ဆာ လိုကောင်းလိုနိုင်ပါတယ်။ firefox3.x က လောလောဆယ် အဆင်အပြေဆုံး ပါ။ ဒါကို မှာ ဆွဲချယူနိုင်ပါတယ်။
It is clear that you need to installatrue Myanmar Unicode Standard and use latest version of Firefox or IE. Please download Firefox from . Unicode Standard fonts can be download free from 1. Padauk from SIL 2.Myanmar3 3.Pyidaungsu 4.Others
မေး ။ ။ ဒီစနစ်အစား ဇော်ဂျီလိုစနစ်မျိုး သုံးလို့မရဘူးလား။
Why can't we use Zawgyi instead of mentioned method?
ဖြေ ။ ။ ဇော်ဂျီလိုစနစ်မျိုးကရေတိုအတွက်ပဲကောင်းပါတယ်။ ဒီစွယ်စုံကျမ်းက နောင်လာမယ့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက် လုပ်နေရမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာမှာ အသုံးပြုတာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဒါကမြန်မာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ ယူနီကုတ်စံအပြည့်အဝမလိုက်နာတဲ့စနစ်ကိုဒီလိုနေရာမှာ သုံးမိရင် ခုရှုပ်နောင်ရှင်းရအလွန်ခက်မယ့် ကိစ္စကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါကြောင့်အစကတည်းက သည်းခံပြီး ယူနီကုတ်စံအပြည့်အဝ လိုက်နာတဲ့ စနစ်ကိုပဲလုံးဝသုံးသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ။ မြန်မာယူနီကုတ်စနစ်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့စနစ်ဖြစ်အောင် ပညာရှင်များက ကြိုးပမ်းနေပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောပြပါရစေ။
Zawgyi and other pseudo-Unicode systems are suitable for private web pages and blogs. However, they don't comply with the standards called for by the World-Wide Web Consortium (W3C), which recommends usage of Unicode systems. The Myanmar Wikipedia belongs to the Internet community. Please consider the long term and request that you help the Wikipedia by using the standard,l fully-compliant Unicode Standard fonts.
မေး ။ ။ ယူနီကုတ်စနစ်ရော၊ စာလုံးရော စက်မှာသွင်းပြီးသွားပြီ။ စာလုံးတွေကလေးဒေါင့်တွေဖြစ်နေတယ်။
I have already installed Unicode System, but cannot see Myanmar characters. Only squares or ?.
ဖြေ ။ ။ မိတ်ဆွေရဲ့ ဝက်ဗရောက်ဆာကို ယူနီကုတ်နဲ့သဟဇာတဖြစ်အောင်ချိန်ညှိရမှာပါ။ Internet Explorer မှာဆိုရင် View-> Encoding then select ::Unicode(UTF8)ကိုရွေးပေးပါ။ Mozilla Firefox ဆိုရင် View->Character Encoding မှာ Unicode(UTF8) ကိုရွေးပေးပါ။
You have to set your web browser to understand Unicode. For IE, go to "View," "Encoding" then select "Unicode (UTF8)". Also, go to "Internet Options", click on "Fonts" on the "General" tab, find Myanmar for "Language scripts" and select "Padauk." For Firefox, go to the "View" menu, select "Character Encoding," then select "Unicode (UTF8)."
မေး ။ ။ မြန်မာလိုတော့ပေါ်တယ်။ ဒါပေမယ့်စာလုံးပုံစံမမှန်ဘူး။ ကျွန်တော့စက်မှာ ဇော်ဂျီလည်း ထည့်ထားတယ်ခင်ဗျ။
The characters are not rendered correctly. I have Zawgyi font in my computer.
ဖြေ ။ ။ Firefoxမှာဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ Tools->Option အောက်က Content Tab ကိုရွေးပေးပါ။ Fonts & Colors ထဲက Default font ကို Myanmar3 (သို့) Padauk (သင့်စက်မှာထည့်ထားတဲ့ယူနီကုတ်စာလုံး)ကိုပြောင်းပေးပါ။
Change your browser font to Myanmar3 or Padauk (whatever the Unicode font in your machine). For Firefox go to Tools->Options. Select Content Tab and Select the Unicode font(the one you have installed in your machine ) for the Default font. For IE, go to "Internet Options", click on "Fonts" on the "General" tab, find Myanmar for "Language scripts" and select "Padauk." For Firefox, go to the "View" menu, select "Character Encoding," then select "Unicode (UTF8)."
Moreover, for Windows users, you need to do the two most essential steps mentioned in details through on this site .
မေး ။ ။ ကျွန်တော်က ဝင်းမြန်မာစာစနစ်ကိုပဲရိုက်တတ်တာ။ မြန်မာ၃ လက်ကွက်ရိုက်ရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။
ဖြေ ။ ။ သံလွင်Soft က မိုင်ဝင်းလက်ကွက်ကိုဒီမှာ  ဆွဲချယူပြီးစက်ထဲထည့်လိုက်ပါ။ Tavultesoft Keyman မရှိရင်သူ့ကိုပါ သွင်းရမှာပါ။ အပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကလွဲလို့ ဝင်းလက်ကွက်ရိုက်ရသလိုပဲခံစားရမှာပါ။
မေး ။ ။ Even the Unicode compliant fonts do not conform each other. I install Padauk, Myanmar3, and Myanmar1. They display the words differently. For example
I tried the phrase [ဘာသာမပြန်နှင့်ပါ။] in the Microsoft word with3different fonts, it shows differently. Try yourself in the MSWord.
ဖြေ ။ ။ Padauk and Myanmar3 should be able to conform each other while Myanmar1 is not compliant with latest version of Unicode Standard.
မေး ။ ။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ စာရေးရင် ပေါင်းတင်ပြီး ရေးချင်တာဗျာ - ဓာတ်ပုံနေရာအထားအသိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ရှင်းပြထားတာတွေ တွေ့လို့ အဲတာတွေကိုတော့ လေ့လာပြီးပါပြီ - ဒါပေမယ့် Upload တင်ဖို့ကျတော့ လိုက်ရှာတာနေရာတွေ့ပေမယ့် တင်ခွင့်မပေးသေးဘူးဆိုပြီး ပြနေတယ် - ဝီကီသုံးတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးတာဆိုတော့ သိပ်လည်း အများကြီး နားမလည်သေးဘူး - သိတဲ့သူများ တစ်ချက်လောက် ကူညီကြစေချင်ပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ဝီကီသုံးတာ ရက်ပိုင်းပဲ ရှိသေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းတင်လို့ရမှာပါ...ဆက်လက်ရေးသားပါ...အားပေးပါတယ်...။
မေး ။ ။ Login မဝင်လဲ ပြင်ခွင့်ပေးထားပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ပြင်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ အချို့အရေးကြီးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ သို့မဟုတ် ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတွေကိုတော့ အက်ဒမင်က ပိတ်ထားတဲ့အတွက် ပြင်ဆင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
i will read more about buddhist meditation book.nobody write about meditation in deep on wikipedia.
Q: I installed myanmar unicode font on my android phone. But it is not correct to type and read in wikipedia apk. How should I do? Where can I get unicode font for my android phone to read correctly in wikipedia.
၁ religion ques
၂ Savage mountain အကြောင်း
၃ photo upload
၅ Wiki Map
၈ PDF ဖိုင်
၁၃ I want to create Myanmar Artist Profile
i will know,any one writing about buddha meditation?
Savage mountain အကြောင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
Savage mountain အကြောင်းအား မြန်မာဘာသာဖြင့် အပြည့်အစုံသိချင်ပါသည်။ အောက်ပါလင့်တွင် ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ http://www.86wiki.com/view/1977733.htm
ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အကြောင်းရေးထားပါတယ်။ စာတော့ရေးပြီသွားပေမယ့် ပုံမပါဘူးဖြစ်နေတယ်။ သုံးတာ၂ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပုံဘယ်လိုတင်ရပါမလဲ။
ပုံတင်နည်းလမ်းညွှန်မှာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Ninja⛧Strikers «☎» ၀၅:၁၀၊ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၁၅ (UTC)
၁။စာအုပ်ထဲကပုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ရင် ဘာလိုင်စင်ပေးရမလဲဟင်။ စာအုပ်အဖုံးတွေကပြဿနာမရှိပေမယ့် စာအုပ်အတွင်းစာသားတွေမှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ။
၂။documentထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရော ဘယ်လို လိုင်စင်ပေးရမလဲဟင်။အင်တာနက်ကနေ document၁ခုdownထားတာ။အဲ့ထဲက ဓာတ်ပုံကို ဝီကီမှာတင်ချင်လို့ပါ။
အင်တာနက်မှာသေသေချာချာရှာဖတ်ကြည့်ရင် တွေ့မှာဆိုပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းမတတ်တော့ တချို့ရေးထားတာတွေ နားမလည်လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Yin May Lwin (talk) ၁၅:၃၁၊ ၃၁ မေ ၂၀၁၅ (UTC)
မေး ။ ။ Wiki Map မှာ တက္ကသိုလ်၊ တခြားထင်ရှားတဲ့ နေရာတွေရဲ့ တည်နေရာပြ point ကို ထည့်သွင်းခွင့်ရှိပါသလား။ ထည့်မယ်ဆို ဘယ်လိုထည့်ရမလဲ။ Preceding unsigned comment added by ‎Kaung Zan AE (ဆွေးနွေး)
Wiki Map ဆိုပြီးတော့ သီးသန့်မရှိပါဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးအတွင်းက Infobox မှာ နဂိုရှိပြီးသား မြေပုံပေါ်မှာ တည်နေရာကို coordinates အသုံးပြုပြီး ပြသပေးတာပဲရှိပါတယ်။ အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်က လောလောဆယ် မြန်မာဝီကီမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မရှိသေးပါဘူး။ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်ဝီကီဖက်က Template:Location map, Template:Coord စာမျက်နှာတွေမှာ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၃:၅၃၊ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ စာမျက်နှာရဲ့ ခေါင်းစဉ်က အခြားနောက်ထပ် စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခု ဖန်တီးတဲ့အခါမှာ နာမည်တူနေပြီး ဒုတိယအသစ်တစ်ခုက အဲ့ခေါင်းစဉ်ကလွဲပြီး ကျန်တာထားလို့မသင့်တော်ရင် ပထမတစ်ခုကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှာပါလဲခင်ဗျာ။ ခေါင်းစဉ်နာမည်တွေကိုရော ပြန်ပြောင်းလို့ရပါသလားခင်ဗျာ။Author Thu ၀၅:၃၂၊ ၂ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
ရှိနှင့်ပြီးသော ခေါင်းစဉ်ကို အသစ်ဖန်တီးလို့တော့ မရပါဘူး။ အကြောင်းအရာတူပြီး ခေါင်းစဉ်ကွဲလွဲနေတာမျိုးကျတော့ ပိုမိုသင့်လျော်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ဆီကို redirect လုပ်ပါတယ်။ မေးခွန်း သိပ်မရှင်းဘူးဗျ။ ခေါင်းစဉ်အမည်ပြောင်းဖို့ဆိုရင် ခေါင်းစဉ်အပေါ် အလယ်လောက်က ရွှေ့ရန် ကိုနှိပ်ပြီး အမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၅:၃၈၊ ၂ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များမှ ကောင်းနိုးရာရာ နှစ်သက်ရာ ဆောင်းပါးများကို ဝီကီတွင် တင်လိုပါသည်။ တင်၍ ရ မရ သိလိုပါသည်။
Johncornersky (ဆွေးနွေး) ၁၇:၀၇၊ ၁၇ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
ဆောင်းပါးလိုက် ကူးယူတင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဝီကီဆောင်းပါးထဲမှာ အကိုးအကားအချက်အလက် ထည့်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲ ယူသုံးနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၁၁၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၁၆ (UTC)
PDF ဖိုင်အနေနဲ့ download လုပ်ရင် စာအမှန် မပေါတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ် တခြား download page ပုံစံလေးတွေရှိရင်လည်း သိချင်ပါတယ်
အဲဒါက mediawiki ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရဲ့ bug ဖြစ်တာကြောင့် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ဖို့ တောင်းဆိုထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်းခံပေးပါဦး။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၁:၄၆၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ (UTC)
Broတို့​ရေ ကမ္ဘာ​​​ဂြိုဟ်ဆောင်းပါး မှာပြင်စရာရှိလို့ပြင်ချင်တာပြင်မရဘူးဖြစ်​နေတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ Thaw Htet Tun (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၄၊ ၈ မတ် ၂၀၁၈ (UTC) @Thaw Htet Tun: မင်္ဂလာပါ။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဆောင်းပါးကို လက်သရမ်းမှုတွေများတဲ့အတွက် အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူ အဆင့်မှ ပြင်ဆင်ခွင့်ရအောင် ကာကွယ်ထားတာပါ။ အဲဒီအဆင့်ရဖို့ဆိုရင် အကောင့်တစ်ခုဟာ အနည်းဆုံး ၄ ရက်သက်တမ်းရှိပြီး အခြားသော ပြင်ဆင်မှု ၁၀ ကြိမ်ပြုလုပ်ပြီးမှ အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူအဆင့်ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအဆင့်ရရင် ပြင်လို့ရပါပြီ။ လောလောဆယ် တခြား ကာကွယ်မထားတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ လိုက်ပြင်လို့ ရပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၁၀၊ ၈ မတ် ၂၀၁၈ (UTC)
ဗျည်းဆိုတာဘာလဲ Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၀၂:၀၄၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
ဗျည်း ဖတ်ကြည့်ပါ အစ်ကို။--ခင်မောင်မောင်လွင် (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၁၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး)  ၁၁:၁၅၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
အဝဂ် မှာ အ အက္ခရာ အပို ဖြစ်​နေတယ် ထင်ပါတယ် Mg Myat Noe (ဆွေးနွေး) ၁၁:၁၈၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
SIL Link ကအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ <Khinelay (ခိုင်လေး) ၁၀:၁၄၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC) khinelay Khinelay (ခိုင်လေး) ၁၀:၁၄၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)>
ပြင်ပေးထားပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၂:၁၀၊ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၈ (UTC)
မြန်မာဝေါဟာရ စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုစာလုံး၏ synonym ( အဓိပ္ပာယ်တူသော) စာလုံးများကို ဘယ်နေရာမှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါသလဲရှင့် ဥပမာ - ကချော်ကချွတ် (synonym: ကချော်ကချက်၊ ကပေါ့ကပြက်၊ ကပေါ်ကရော်) ။ ကပေါက်တိကပေါက်ချာ (syn: ကပေါက်ချိကပေါက်ချာ) — AyeAye Yu (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 04:41,3July 2018
မြန်မာဝစ်ရှင်နရီ (https://my.wiktionary.org) မှာ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၄:၅၃၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ (UTC)
တိုက္ေတနီယံသတၴဳအေႀကာင္သိခ်င္လို ့ရွာမေတြ့ဘူး Kyawkyaw sein (ဆွေးနွေး) ၀၇:၄၇၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)
တိုက်တေနီယမ် စာမျက်နှာ ရှိပါတယ်ဗျ။ ဇော်ဂျီနဲ့ ရိုက်ရှာလို့ မတွေ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၈:၁၇၊ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၈ (UTC)
I want to create Myanmar Artist Profile[ပြင်ဆင်ရန်]
How do I start for creating of singer Htet Hlyam Hmue's Page? He is actually well known person. Ryzen Lynn (ဆွေးနွေး) ၁၄:၁၂၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
@Ryzen Lynn: မင်္ဂလာပါ။ ဝီကီပီးဒီးယားမှာ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ဆောင်းပါးသစ်များ စတင်ရေးသားဖို့အတွက် Wikipedia:သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး၊ Wikipedia:ထင်ရှားအရေးပါမှု နဲ့ Wikipedia:ဝီကီပီးဒီးယားက ဘာမဟုတ်ဘူးလဲ စတဲ့ လမ်းညွှန်ချက် မူဝါဒတွေကို ဖတ်ရှုပြီးမှ ရေးသားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ သိလိုတာ မေးမြန်းလိုတာရှိရင် ကျွန်တော့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာမှာလဲ ဆက်လက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၁၄:၂၆၊ ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:Questions&oldid=472616" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။